विश्वका सबै भन्दा राम्रो प्राकृतिक पोखरीहरू यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | के हेर्ने, यात्रा
संसारसँग सुन्दर, रमणीय स्थानहरू छन् र यो उत्तम हुनेछ यदि हामी यसलाई सजिलैसँग अन्वेषण गर्न साब्बाटिकल वर्ष लिन सक्छौं, सही? ती सपना गन्तव्यहरु बीच धेरै छन् प्राकृतिक पोखरी, पोखरीहरू, इनारहरू, पृथ्वीमा प्वालहरू कि केहि वा अरूसँग पानी छ र शानदार पोखरीहरू बनेका छन्, सपनाको संसारको विशिष्ट।
राम्रो कुरा यो हो कि तिनीहरू अवस्थित छन्, कि तपाईं तिनीहरूलाई भेट्न सक्नुहुन्छ र ती मध्ये धेरैमा यो पौडीउन, छ्याप्नु, शान्त हुन सम्भव छ। त्यहाँ धेरै छन्, तर यो हाम्रो चयन हो संसारको सबै भन्दा राम्रो प्राकृतिक पोखरी।
1 बहमाह, वाडी शब
2 जियोला, ग्रीस मा
3 रानीको बाथरूम, हवाई
4 सुआमा, सामोआमा
5 हिलियर ताल, अष्ट्रेलिया
6 बायोलिमिनेसेन्ट बे, पोर्टो रिकोमा
7 पामुक्कले, टर्की
8 हवासु फल्स, संयुक्त राज्य
9 ह्यामिल्टन पोन्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका
10 शैतानको पूल, जिम्बावे
11 Jellyfish ताल, माइक्रोनेशिया
12 फिंगलको गुफा, स्कटल्याण्ड
बहमाह, वाडी शब
यो सुन्दर पोखरी हो ओमानमा, हावियात राष्ट्रिय निकुञ्जमा, दादाब क्षेत्रमा। यो कारद्वारा पुगिएको छ, सडकमा जुन Qurayat र Sur लाई जोड्दछ। यो केवल जमिनमा भएको उदासीनता हो जुन पानीले भरिएको छ र स्थानीयहरूका अनुसार यो प्वाल हजारौं र हजारौं वर्ष पहिले उल्का पिण्डको फल हो। यो प्वाल ओमानको खाडीको तटमा करीव २०० मिटर टाढा अवस्थित छ।
त्यहाँ थोरै छ पार्कि and र एक परिवर्तन स्थान त्यसैले तपाईं आगन्तुकहरू प्राप्त गर्न तयार हुनुहुन्छ। पानी क्रिस्टल स्पष्ट छन् ताजा र नुन पानीको मिश्रण, जसले यसलाई एक सुन्दर फेरोइज रंग दिन्छ, र सबै वरपरका क्षेत्रहरू मरुभूमि छ त्यसैले यो एक शानदार साइट हो।
जियोला, ग्रीस मा
Giola छ Thassos मा र यो केवल एस्ट्रिस गाउँ नजिकैको तटमा एउटा चट्टानी दुर्घटना हो। पानी एजियन सागरको हो, निलो र केही चिसो, तर तिनीहरू नियमित रूपमा पोखरीमा बाढी आउँछन् र त्यहाँ पार्क गर्दा समुद्रको सम्बन्धमा तापमानमा केही भिन्नता हुन्छ।
यो एक सुपर लोकप्रिय गन्तव्य हो, विशेष गरी गर्मीमा।
रानीको बाथरूम, हवाई
यो अवस्थित अघिल्लो जस्तो मिल्दो साइट छ Kaua'i को तट मा। तटको दुर्घटनाले प्राकृतिक पोखरी बनाएको छ कि समुद्रको पानीले भरिएको छ र तपाईंलाई फुल्का र शान्तिमा पौडी खेल्न अनुमति दिन्छ।
समावेश त्यहाँ झरना छ, सानो तर अन्त्यमा झरना, यति धेरै पर्यटक प्राकृतिक पोखरीमा पानी स्लाइड जस्तै स्लाइड गर्न छनौट गर्दछन्। एक सुन्दरता, त्यसैले यो दिमागमा राख्नुहोस् यदि तपाईं संयोगले हवाई भ्रमण गर्नुहुन्छ।
यो साइट लोटोफागाको गाउँ नजिक छ, उपोला, सामोआ टापुमा। विज्ञहरू भन्छन् कि यो ज्वालामुखी क्रियाबाट गठन गरिएको थियो। आज यो विश्वको सबैभन्दा प्रसिद्ध प्राकृतिक पोखरी हो जसमा उनीहरूले एक सानो घाट र भर्या। पनि बनाए।
सबै तिर हरिया बगैंचा छन्, धेरै उष्णकटिबंधीय, र पानीमा रंगीन माछा र केकरा छन् त्यसैले सबै चीजले आकर्षण थप्दछ।
हिलियर ताल, अष्ट्रेलिया
यो सबै फिरोजाइ पानीको बारेमा होइन, कसरी पौडी खेल्ने बारे गुलाबी पानी? यो सम्भव छ अष्ट्रेलियामा, राज्यको हिलियर तालमा पश्चिमी अष्ट्रेलिया। यसको पानीको गहिरो गुलाबी रंग एउटा विशेष प्रकारको माइक्रो शैवालको कारण हो जुन वरपरको समुद्री सतहमा बस्दछ।
लेक हिलियर मृत सागर जस्तो हो कि यो पौडी खेल्न सुरक्षित छ तर पुग्न गाह्रो छ। अधिक, वास्तवमा, मृत सागर भन्दा, जुन आज धेरै पर्यटक हो। अष्ट्रेलिया एक विशाल देश हो र ईन्ल्यान्ड भन्दा ठीक भन्दा तटमा बढी बसोबास गर्दछ तपाईं समुद्री क्रूज वा हेलिकप्टरबाट यहाँ पाउनुहुन्छ। तर के यो लायक छ?
बायोलिमिनेसेन्ट बे, पोर्टो रिकोमा
यदि हामी रंगीन पानीमा पौडिरहेका छौं भने हामी यसलाई उज्यालो पानीमा पनि गर्न सक्दछौं। यो कुरा पनि हो bioluminescent लागून संसारमा सबैभन्दा प्रसिद्ध, एक पोर्टो रिको, Vieques मा छ। यो एक प्रसिद्ध राष्ट्रिय पोस्टकार्ड हो किनकि यो रात छ कि त्यसमा पौडीरहेका सूक्ष्म जीवहरू र पानीलाई ब्रह्माण्डमा परिणत गर्दछ।
यी टेरेसहरू अवस्थित छन् डेनिज़लीमा र यो कार्बोनेटेड खनिजहरू द्वारा बनेका टेरेसहरू बारेमा छ जुन थर्मल पानीले पृथ्वीको गहिराईबाट बाहिर निस्किन्छ। यो "कटन महल" को रूपमा परिचित छ र हजारौं बर्ष देखि अस्तित्वमा छ र जिज्ञासु आगन्तुकहरु लाई प्राप्त भयो।
पानी तिनीहरू न्यानो र खनिजहरु मा धनी छन् त्यसैले तिनीहरू एक स्पा को रूप मा सेवा।
हवासु फल्स, संयुक्त राज्य
यी झरनाहरू तिनीहरूको सम्बन्धित पोखरीको साथ हुन् एरिजोनामा ग्रान्ड क्यानियनमा। यो अत्यधिक तातो र मरुभूमि क्षेत्रको बिचमा रहेको ओएसिस हो। त्यहाँ झरना लगभग। ० फिट अग्लो छ जुन एकदम ठुलो पोखरीमा अन्त्य हुन्छ।
पानीको कार्बोनेटेड क्याल्शियम सामग्रीको कारण तिनीहरूको एक जीवंत छ निलो र हरियो टोन जुन वरपरको भूभागको रातो टोनसँग बिल्कुल भिन्न छ।
ह्यामिल्टन पोन्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका
यहाँ संयुक्त राज्य मा अर्को गन्तव्य छ, यस अवस्थामा टेक्सास राज्य मा। यहाँ के भएको थियो कि भुईँको पतन भयो र यो प्राकृतिक पोखरी गठन गरिएको थियो, जुन चूना ढुstone्गाका पर्खालहरूले घेरिएको छ र साथै ए पनि समावेश गर्दछ सानो झरना।
ह्यामिल्टन पोन्ड धेरै नै रमणीय सडकमा पुगेको छ त्यसैले यो एक धेरै लोकप्रिय यात्रा हो। यो पार्क भित्र छ जुन छ उत्कृष्ट पैदल यात्रा गन्तव्य.
शैतानको पूल, जिम्बावे
यद्यपि यो यस्तो लाग्दैन भिक्टोरिया फल्स विश्वको सबैभन्दा ठूलो झरनाको धारमा, एक विशाल पोखरी गठन गरिएको छ। दायाँ शून्य मा अभूतपूर्व गिरावट को किनारा मा ...
त्यहाँ गाईडहरू छन् जसले तपाईंलाई प्रवेश गर्न अनुमति दिन्छ, फोटो लिनुहोस् र केही समय रहनुहोस् किनकि यो प्रमाणित भएको छ कि त्यसो गर्न पर्याप्त सुरक्षित छ। फोटोहरू वास्तवमै वास्तविक छन् ...
Jellyfish ताल, माइक्रोनेशिया
यो शानदार ताल हो पलाउ माEil Malk टापुमा। यो पानी यी समुद्री जीवहरू, लाखौंले भरिएको शरीर हो गोल्डन जेलीफिस हरेक दिन माइग्रेट गर्दछ। तिनीहरू मानवका लागि हानिकारक छैनन् त्यसैले स्नोर्कलिंग पर्यटकहरूका बीच धेरै लोकप्रिय भएको छ। यो नछुटाउ!
फिंगलको गुफा, स्कटल्याण्ड
अन्तमा यो स्कटिश रहस्य। स्कटल्याण्डको इनर हेब्राइड्स टापुमा, ए बेसाल्ट स्तम्भहरूको साथ गुफा उत्तरी आयरल्याण्डको तटमा लोकप्रिय विशालकोट कोजवेको उत्तम शैलीमा। एक हो प्राकृतिक ध्वनिक को एक धेरै संग गुफाकिनकि यो क्याथेड्रल जस्तो अग्लो छ तर वास्तवमा आज हामीलाई बोलाउने कुरा पोखरी हो जुन भित्र बनिएको छ। यो अद्भुत छ र तपाइँले यसलाई सानो क्रूज भाडामा लिन सक्नुहुनेछ।
यी संसारका केही उत्तम प्राकृतिक पोखरीहरू हुन्, त्यहाँ अरू धेरै, कम र राम्रा ज्ञातहरू छन् तर कुनै श doubt्का बिना सबै अति सुन्दर।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » के हेर्ने » विश्वका सबै भन्दा राम्रो प्राकृतिक पोखरीहरू